Home Somali News Somaliland: Qaramada midoobay Oo Amaantay Ammaanka, adeegyada iyo Maamulka Madaarka Caalamiga ah...
Hay’adda qaramada midoobay u qaabilsan ammaanka ee magaceeda loo soo gaabiyo UNDSS ayaa ka dareen celisay adeegyada uu maamulka Madaarka Caalamiga ah ee Caasimadda Hargeysa u fidiyo wufuudda laamaha kala duwan ee QM ee booqashada ku yimaada dalka.
Warqad Mahadnaq ah oo Hay’addaasi u soo dirtay xukuumadda Somaliland gaar ahaanna wasiirka duulista hawada iyo gaadiidka cirka waxa ay ku boggaadiyeen macaamilka iyo adeega uu Maamulaha Madaarka Hargeysa iyo shaqaalihiisu ay u fidiyaan weftiyada ka socda hay’adahooda iyo weliba kuwa kale ee la meeqaamka ah ee ka soo dega madaarka.
Warqaddan oo uu soo diray Sarkaal u hadlay hay’adda UNDSS oo magaciisa la yidhaahdo Eliziario Neto ayaa waxyaabaha ay xambaarsanayd nuxur ahaan waxaa ka mid ahaa hambalyo ku socota maamulaha madaarka Hargeysa oo ay sheegeen in muddadii uu xilka hayay oo ay safarro badan ku yimaadeen dalka uu si firfircoon oo xilkasnimo leh ugu adeegay kana caawiyey baahiyahooda . Waxaana ay farriinta warqaddu xambaarsanayd sida tan:
“ Waxaan warqadan kuugu soo qoray inaanu ku ogaysiino sida aanu uga helnay adeega bilaa turxaanta ah ee shaqaalaha uu hogaamiyo Mr Mahamed Yuusuf Ismaaciil, tan iyo markii uu ka bilaabay shaqada madaarka caalamiga ah ee Cigaal. Waxa Mar kasta oo aan soo booqdo garoonka diyaaradaha ee anaga oo wefti awood ah , sida saraakiisha ammaanka UNDSS ama aan ku imaad taayada gaarka ah ee rakaabka caadiga ah, Mr. Mahamed Yussuf Ismail iyo kooxdiisa shaqaalaha ah waxay ahaayeen kuwo firfircoon oo aad noocawiya. Dhammaan shaqaalaha aanu la kulanay siiba Mr Mahamed Yussuf Ismail waxay ahaayeen qaar aad iyo aad aqoontooda masuuliyadeed u sarayso, isla markaana aanu la dhacnay sida wanaagsan ee ay noo cawiyeen oo ay noogu fududeeyeen hawsha aanu u nimid Hargeysa oo ah inaanu u fududayno hawsha sarkaalka U.N ee halkan ku sugan.
Hay’addan oo kamid ah Hay’addaha UN-ta ee xidhiidhka sokeeye ka dhaxayso Wasaaradda duulista isla markaana ay ka wada shaqeeyaan arrimaha maamulka hawada iyo madaarrada ayaa iyagu inta badan xilliyada ay safarrada dalka ku yimaadaan adeegsada Diyaaradahooda gaarka ama kuwa kale ee caalamiga ah. Farriintan ayaana noqonaysa mid kor u qaadda sumcadda Madaarka Ciyaaga, Maamulihiisa iyo weliba kooxda ka hawl gasha, una soo jiidda indhaha caalamka ee adeegsada madaarrada.
Waana markii u horeysay ee ay qaramada midoobay si toos ah uga hadasho adeegyada madaarrada Somaliland iyo tayada ay leeyihiin xirfadyahannada ka hawl galla, kuwaas oo qayb ka ah dedaallada uu qarankani ugu jiro kasbashada beesha caalamku inay ku soo dhiirradaan kana markhaati kacaan horumarka aan la dafiri Karin ee Somaliland ku tallaabsatay.